Musiibo sababtay inuu Shabeel ku seexdo sariir ay qoys leeyihiin - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka WTI
Image caption Shabeelka ayaa markii uu guriga galay si toos ah ugu seexday sariirta
Shabeel dhadig ah oo kasoo baxsaday xero duur joogta lagu xareeyo oo ku taalla gobolka ay fatahaadaha halakeeyeen ee Assam ee dalka Hindiya ayaa si lama filaan ah loo arkay iyadoo ku nasanaysa saxiir dhex taalla guri ay leeyihiin qoys aaggaas daggan.
Shabeelkan ayaa la rumeysan yahay inuu kasoo cararay xerada lagu magacaabo Kaziranga National Park, halkaasoo ay maalmihii lasoo dhaafay musiibada fatahaadda ah awgeed ugu dhinteen 92 xayawaan.
Saraakiil ka socda hay'ad ka shaqeysa ilaalaalinta xuquuqda duur joogta ayaa tagay guriga uu shabeelka galay waxayna u bixiyeen waddo ay si nabad ah ugu baxsan karto.
Khubarada duur joogta ayaa sidoo kale shabeelkan u jaheeyay dhinaca keymaha.
Shabeel dadcun ah oo lagu fuliyay dil ay maxkamad ku xukuntay
Sida laga soo xigtay hay'adda xuquuqda duur joogta ee dalka Hindiya, shabeelkan dhadiga ah ayaa markii ugu horreysay maalintii Khamiista ahayd lagu arkay waddo qiyaastii 200 oo mitir u jirta xerada ay kasoo baxsatay.
Macluumaadka ayaa intaas ku daray in sida ay u badan tahay ay ku dhibaatootay waddada mashquulka badan, kaddibna ay iyadoo magangalyo doon ah gudaha u gashay gurigaas oo ku yaalla meel u dhow jidka.
Rathin Barman, oo hoggaaminayay howlgalkii lagu badbaadiyay shabeelkan ayaa sheegay in ay guriga gashay xilli subax ah, isla markiina ay ku seexatay sariir goglan, halkaasoo ay ku huruday maalintii oo dhan.
"Aad bay u daallaneyd waxayna heshay hurdo dheer oo maalin ah", sidaas ayuu ku yidhi wareysi uu siiyay BBC-da.
Motilal, oo ah ninka iska leh guriga uu shabeelkan seexday ayaa carruurtiisa la qaxay isla markii ay arkeen shabeel kusoo socda.
"Arrinta fiican waxay ahayd in qofna uusan hurdada ka qasin oo ay si fiican u nasatay. Gobolkan aad baa looga qaddariyaa xayawaanka duurjoogta ah", ayuu yidhi Mr Barman.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray: "Motilal wuxuu sheegay inuu xasuus ahaan u xafidi doono furaashka iyo barkinta uu shabeelku ku seexday".
Image caption Ninka guriga iska leh ayaa la qaxay qoyskiisa
Markii shabeelkan loo furay waddada ay ku baxsaneysay ayaa laga istaajiyay dhamaan gawaaridii isticmaaleysay waddada.
Hase yeeshee Mr Barman ayaa sheegay inaan wali la hubin in shabeelka uu keynta sii galay ama inuu wali meel dhexe ku jiro.
Ma jiro shabeel ku dhintay Musiibada fatahaadda ah ee uu shabeelkan kasoo baxsaday.
Balse 92-da xayawaan ee halkaas ku bakhtisay ayaa waxaa ku jira 54 deero, 7 wiyil iyo hal maroodi.
Fatahaadaha Mansoon ayaa halakeeyay gobollada dhinaca bari ee kala ah Bihar iyo Assam waxaana ku dhintay dad kor u dhaafaya 100 ruux, halka malaayiin kalena ay ku barakaceen.
Daadadkan oo xilli ahaan u socda inta u dhaxeysa bilaha Juun iyo Sitembar ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay dalalka Nepal iyo Bangladesh.